Ifulethi Elithokomele Enkabeni Yedolobha - I-Airbnb
Ifulethi Elithokomele Enkabeni Yedolobha
Šiauliai, Šiaulių apskritis, i-Lithuania
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Irina
Leli yifulethi elihlakaniphile, lesimanje, elizimele. Kuyisisekelo esihle sokuhlola i-Šiauliai ngezinyawo! Leli fulethi elibanzi, eligcwele ukukhanya elinemibhede engu-2 lizokunikeza konke ukunethezeka nezinsiza ozidingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho e-Šiauliai kube yinkumbulo ongayigcina phakade. Ukusuka lapha ungahamba uye ezindaweni zokudlela ezinhle kakhulu zendawo, imigoqo kanye nezindawo zokudlela. Kusuka lapha ungahlola inyuvesi, umtapo wolwazi, amapaki edolobha, impilo yasebusuku, ngisho nendawo yokuzivocavoca!
Ifulethi lilala abantu abangaba ngu-2 futhi lizimele ngokuphelele. Kukhona igumbi lokugeza, ikhishi elihlomele kahle (okuhlanganisa nomshini wokuwasha) kanye negumbi lokuhlala elinethezekile, lesimanje. Wamukelekile ukusebenzisa zonke izici zefulethi futhi ngengeze okunye ukuthinta okwengeziwe ukuze ngikwenzele ikhaya usuka ekhaya, njengesikomisa izinwele nesambulela.
Yize ingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabangu-2, leli fulethi lifaneleka kahle izithandani ezivakashela idolobha lethu ukuze zihlale isikhashana, amaholide amade noma ibhizinisi.
Ngihlala ngikhona ukukusiza ukuthi uthole okuningi ngokuhlala kwakho. Ngiyaziqhenya kakhulu ngedolobha lami futhi ngifuna uthande nalo, ngakho-ke uma kukhona okunye okuzokwenza ukuvakasha kwakho kuhambe kahle ngangokunokwenzeka (njengamashaja, ulwazi lwendawo njll.) vele ungibuze futhi mina ngizokwenza konke okusemandleni ami ukusiza uma ngikwazi.
Ngihlala ngikhona ukukusiza ukuthi uthole okuningi ngokuhlala kwakho. Ngiyaziqhenya kakhulu ngedolobha lami futhi ngifuna uthande nalo, ngakho-ke uma kukhona okunye okuzokwenza uku…
Hlola ezinye izinketho ezise- Šiauliai namaphethelo